မော်ရင်ဟို ရဲ့ အံ့ဖွယ်အရှုံး ၊ ဘာပေ ကို လိုချင်လာတဲ့ ဘာဆာ ၊ ကွင်းအမည်ရောင်းမယ့် နယူးကာဆယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
မော်ရင်ဟို ရဲ့ အံ့ဖွယ်အရှုံး ၊ ဘာပေ ကို လိုချင်လာတဲ့ ဘာဆာ ၊ ကွင်းအမည်ရောင်းမယ့် နယူးကာဆယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
စပိန် လာလီဂါ ထိပ်သီး ကလပ် ဘာစီလိုနာ ဟာ PSG တိုက်စစ်မှူးလေး ခီလီယံ အမ်ဘာပေ ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာပေ ဟာ ခုချိန်ထိ PSG နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း မတိုးရ သေးသူ ဖြစ်ပြီး နွေရာသီမှာ စာချုပ်ကုန်ဆုံးမယ့်သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘာပေ ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ပြောင်းဖို့ အလားအလာများ နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေ ပေမယ့် ဘာစီလိုနာ ကတော့ ဇန်နဝါရီမှာ ယူရို သန်း ၉၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်းဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ ယမန်နေ့ ညပိုင်းက သတင်းထွက် ပေါ်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မနေ့ညက ကစားသွားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါ ကွန်းဖရန့် လိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ရိုးမား ဟာ အဝေးကွင်း မှာ နော်ေ၀ ကလပ် ဘိုဒို ဂလင့် ကို ၆-၁ နဲ့ အံ့ဖွယ် ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ ပါတယ် ။
နူနို ဆန်းတိုစ့် ရဲ့ စပါး အသင်းကလည်း နယ်သာလန် ကလပ် ဗွီတက်ဆီ ကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး အုပ်စု G မှာ တတိယ နေရာသာ ရရှိထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူရိုပါလိဂ် မှာတော့ ဝက်စ်ဟမ်း ၊ နာပိုလီ တို့ ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေကို ၃-၀ ရလဒ်တွေနဲ့ ဂိုးပြတ် အနိုင် ရရှိ ခဲ့ကြပါတယ် ။
နာပိုလီ အတွက် ဂိုးသွင်း ပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဗစ်တာ အိုဆင်ဟမ်း ကတော့ ဒရိုင်းမာတင် ရဲ့ ဥရောပ ၃ ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းနိုင်မှု မှတ်တမ်းကို လိုက်မီ သွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် နည်းပြ နာဂယ်စမန်း ဟာ ကိုဗစ်ပိုး ကူးစက် ခံထားရတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလာ ဟာ ယမန်နေ့က လန်ဒန် မှာ ရှိတဲ့ မဒမ်တူးဆော့ဒ် ပြတိုက်က သူ့ရဲ့ ပုံတူ ရုပ်တု ကို သွားရောက် လေ့လာ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ပုံတူ ရုပ်တု ကို ဒီကနေ့မှာ စတင် ပြသ သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းတွေရဲ့ အဆင့် ရပ်တည်မှုကို ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီထုတ်ပြန်ချက် မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁ နေရာမှာ ဆက်လက် ရပ်တည် နေပြီး ဒုတိယ နေရာက ဘရာဇီး ဟာလည်း နေရာ အပြောင်းအလဲ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဥရောပ နေးရှင်းလိဂ် မှာ ဗိုလ်စွဲ ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ် အသင်းကတော့ တဆင့် တက်ကာ အင်္ဂလန် ရဲ့ အဆင့် ၃ နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ကနေဒါ အသင်းကတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ကမ္ဘာ့ အဆင့် ၅၀ အတွင်း ကို ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာနိုင်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ထုတ်ပြန်မှု မှာ အဆင့် ၄၈ ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဇနီးသည် က ကွာရှင်းခဲ့မှုကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ၂ ကြိမ်ကို ပျက်ကွက် ခဲ့ရတဲ့ PSG တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီ ဟာ ယမန်နေ့က လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် ကို ပြန်လည် ပူးပေါင်း ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မျက်မြင်တွေရဲ့ ပြောဆိုချက် အရ အီကာဒီ ကို ဇနီးဖြစ်သူ ဝမ်ဒါ နာရာ က ကားမောင်း လိုက်ပို့ ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ သူတို့ အကြား ပြန်လည် သင့်မြတ်သွားကြပြီလို့ မဆို နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းရဲ့ ဆော်ဒီပိုင်ရှင်သစ်တွေဟာ ကွင်းရဲ့ စိန့်ဂျိမ်းစ် ပတ်ခ် အမည် ကို ရောင်းချပြီး တရားဝင် စပွန်ဆာ ဝင်ငွေ ရရှိအောင် စီစဉ်နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကတော့ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ဒုတိယမြောက် ပွဲစဉ် က ပရိသတ်တွေ ကွင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး UEFA ရဲ့ ပေါင် ၇ ထောင် ဒဏ်တပ်မှု ကို ခံခဲ့ ရတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ လူငယ်လေး အန်ဆု ဖာတီ ဟာ အသင်းနဲ့ ၂၀၂၇ ခုနှစ်ထိ စာချုပ်သက်တမ်း မတိုးမီမှာ ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် ၃ ခု ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် နည်းပြကြီး မာဆယ်လို ဘီယေဆာ က ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင် ဖိလစ် ကို ဒဏ်ရာ ကနေ သက်သာလာကာစမှာ ချက်ချင်း အသုံးပြု သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့တာကြောင့် ဒီတပတ် ကစားမယ့် ဝုဗ် နဲ့ ပွဲစဉ် ကို ပါဝင် တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
Previous Article ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်မှုကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာတုန်းကလို ဆင်ခြေမျိုး ပေးသွားခဲ့တဲ့ မော်ရင်ဟို
Next Article ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ခေါင်းတိုက် စွမ်းရည်ကို သဘောကျ နေတဲ့ ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား